Culimada Somaliland oo bayaan culus ka soo saaray kaniisadda laga furay Hargeysa (Daawo) – Balcad.com Teyteyleey
Culumaa’udiinka Somaliland ayaa bayaan culus ka soo saaray kaniisadda dhowaan laga furay magaalada Hargeysa, bayaanka oo ka koobnaa ilaa iyo toban qodob ayaa ku saabsanaa aragtidooda iyo go’aano adag ee ay ka qaateen.
Bayaanka ka soo baxay kulanka Culimada Somaliland ee xalay ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa lagu sheegay in furitaanka kaniisadaasi ay tahay mid aan waafaqsaneyn shareecada Islaamka, iyagoona sheegay in kaniisadda markeedii horeba ay si sharci darro u dhiseen gumeystihii Ingiriiska.
Culimaa’udiinka ayaa ugu baaqay Dowladda Somaliland inay dib uga laabato go’aanka ay ku furtay kaniisadda, iyagoona ugu baaqay hay’adaha ka howlgala Somaliland iyo haddii ay jirto cid heshiis la gashay xubnaha ku lugta leh kaniisadaasi ay ka laabtaan.
Kulanka dhex maray culimada Somaliland waxaa ka qeyb galay mashaa’iq caan ka ah gobolada Somaliland waxaana ka mid ahaa: Sheekh Maxamed Cumar Diri, Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre, Sheekh Ciise Maxamuud Cabdullaahi, Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo xubno kale.
Dhinaca kale Culimaa’udiinka Somaliland ayaa sheegay in kaniisad laga furo magaalada Hargeysa aan marmarsiinyo looga dhigan karin masaajidda ku yaala dhulka gaalada degan tahay, iyagoona sheegay in diinta Islaamka ay tahay tan kaliya ee saxda ah isla markaana meesha ka saaray inay jirto diinta Kirishtaanka.
The post Culimada Somaliland oo bayaan culus ka soo saaray kaniisadda laga furay Hargeysa (Daawo) appeared first on Ilwareed Online.
Xafiiska Madaxweyne Faramaajo Maxaa Ka Qaldan?